The Gangster, the Cop, the Devil (2019) | MM Movie Store
၂၀၁၈ တုနျးက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ မာဒုနျဆှတျရဲ့ဇာတျလမျးကောငျးတဈကားပါ Train to Busan ထဲကလူသနျကွိး မာဒုနျဆှတျဆိုတာနဲ့ ဇာတျလမျးကကောငျးပွီးသားဆိုတာ ခနျ့မှနျးမိမှာပါ အခုကားကတော့ဇာတျလမျးနာမညျအတိုငျးပါပဲ ဂိုဏျစတားတဈယောကျရယျ ရဲတဈယောကျရယျ မကောငျးဆိုးရှားတဈကောငျရဲ့ ဇာတျလမျးပါ
သူတို့ ၃ ယောကျ ဘယျလိုမြားဆကျစပျနကွေပါလိမျ့ ခြှနျးခြောငျတောငျပိုငျးမှာဆကျတိုကျဆိုသလို ဖွဈနတေဲ့ လူသတျမှုတှကေိုကှငျးဆကျလူသတျမှုအဖွဈ ဆကျစပျမိတဲ့ ရဲစုံထောကျ တဈယောကျ…..မမြှျောလငျ့ဘဲ ကှငျးဆကျလူသတျသမားရဲ့ဓားနဲ့အထိုးခံလိုကျရတဲ့ လူဆိုးဂိုဏျးခေါငျးဆောငျတဈယောကျ……
လူသတျသမားကို မိဖို့အရေး ပူးပေါငျးလိုကျကွရဖို့ ဖွဈလာတဲ့အခါ…..ရဲ နဲ့ လူဆိုး ပူးပေါငျးဖို့ရာ ဖွဈနိုငျပါ့မလား?????ကှငျးဆကျလူသတျသမားကိုရော ဖမျးမိပါ့မလား?????မှုခငျးဇာတျလမျးဖွဈတဲ့အတှကျ စလယျဆုံး လုံးဝစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပါတယျ တဈကားလုံးကို အသညျးတယားယားရငျတဖိုဖိုနဲ့ ကွညျ့ရမယျ့ကိုရီးယားကားကောငျးတဈကား ဖွဈပါတယျဗြာ
၂၀၁၈ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မာဒုန်ဆွတ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ကားပါ Train to Busan ထဲကလူသန်ကြိး မာဒုန်ဆွတ်ဆိုတာနဲ့ ဇာတ်လမ်းကကောင်းပြီးသားဆိုတာ ခန့်မှန်းမိမှာပါ အခုကားကတော့ဇာတ်လမ်းနာမည်အတိုင်းပါပဲ ဂိုဏ်စတားတစ်ယောက်ရယ် ရဲတစ်ယောက်ရယ် မကောင်းဆိုးရွားတစ်ကောင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ
သူတို့ ၃ ယောက် ဘယ်လိုများဆက်စပ်နေကြပါလိမ့် ချွန်းချောင်တောင်ပိုင်းမှာဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်နေတဲ့ လူသတ်မှုတွေကိုကွင်းဆက်လူသတ်မှုအဖြစ် ဆက်စပ်မိတဲ့ ရဲစုံထောက် တစ်ယောက်…..မမျှော်လင့်ဘဲ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားရဲ့ဓားနဲ့အထိုးခံလိုက်ရတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်……
လူသတ်သမားကို မိဖို့အရေး ပူးပေါင်းလိုက်ကြရဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ…..ရဲ နဲ့ လူဆိုး ပူးပေါင်းဖို့ရာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?????ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကိုရော ဖမ်းမိပါ့မလား?????မှုခင်းဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် စလယ်ဆုံး လုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် တစ်ကားလုံးကို အသည်းတယားယားရင်တဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရမယ့်ကိုရီးယားကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ